Cologne Carnival Oo Sida loo Waxaa Hel | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Cologne Carnival Oo Sida loo Waxaa Hel
Festival Cologne waa xaqiiqo ah oo qiimihiisu ku daray liiska baaldi aad. 1.5 Milyan oo xaadira ku dhowaad sannad kasta, heshiiyaan! Sidoo kale loo yaqaan ee xilli ciyaareedka shanaad, caansan dunida ee this Dabaaldag waa inuu noqon ah waayo-aragnimo ee Meyeydaan. damaashaad Cologne The ma aha oo kaliya mid xiiso leh, laakiin sidoo kale super fudud si aad u hesho si ay u tareen, iyadoo la kaashanayo Save A Tareenka Halkan waxaa ku qoran talooyin our waayo, Festival Cologne The 2019 iyo sidaad u tagi karto tareen.
Waa maxay Si Boorso for Cologne Festival:
Waa wakhtiga si ay u tagaan dhar shopping. Yaa aan jeclayn labiska? style waa halkii ay ka duwan mahrajaano Brazil. Ka fikir dheeraad ah "Soldier Prussian" qiyaasta culus ee qurxiyo iyo sequins!
Cologne Carnival waa kor ku xusan oo dhan iid ah oo dharka, malana, sidaas isticmaasho imagination! The dhalaal fiican ee.
Waayo, kubadaha iyo dhacdooyin kale oo indoor, dharka khafiifka ah waxa lagula talinayaa. Haddii aad dhabtii doonaysid in waayo-aragnimo iidan, ka dibna aad u baahan tahay in ay ka baxsan tag! Just xasuuso inaad xirto wax diiran hoose! The taageere dhab ah Cologne damaashaad lama off by ay cimilada! Martidiisii ​​yimaadaan daqiiqadii ugu danbeysay ka heli doontaa waji, dharka, iyo dukaamo badan ee bartamaha magaalada-up ka dhigi. Miciinka u dambeeya, sanka fudud casaan warqad yahay oo dhan waxaad u baahan tahay. Ma doonaysaa in qaar ka mid ah dharka info.
Munich in ay Tareenadu Cologne
Sidee loo helaa si Cologne Festival:
Aad ku socoto in ay doonayaan in ay qabsadaan tareen si Cologne ee saldhiga ugu weyn. Tani waxay sidoo kale waa mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee Europe ee tareenka, si aadan u tartami doona si aad u hesho waqti adiga kugu habboon la SaveATrain.
Waxaad si dhakhso ah oo si raaxo leh u safri kartaa Festival Cologne ka soo magaalooyinka waaweyn ee Germany iyo dalalka kale ee Yurub: Maalin walba, in ka badan 1,300 tareenada ordi dhexeeya Cologne iyo meelaha Germany oo dhan iyo dibadda. Warbixinta kooban ee adeega ka mid ah tareenada ee caalamiga ah-xawaaraha sare ee isku xidha Cologne la London, Paris, Amsterdam, iyo Brussels. Iyadoo Adeegga tareenka-xawaaraha sare si Frankfurt, xarunta tareenka ee Koln-Deutz - Terminalka labaad ee loogu talagalay tareenada xawaaraha sare ee ICE gudaha Cologne - iyo Cologne / Bonn Airport Idaacadda, Cologne ayaa sii xoojinaya doorka muhiimka ah sida xarunta dhexe ee tareenka gaadiidka.
adeegga degaanka The gaadiidka dadweynaha ee Cologne iyo dhulka ku wareegsan sidoo kale waa heer sare, soo bandhigtay dhulka hoostiisa, taraamka, iyo adeegyada basaska in ku siin doonaa dhaqdhaqaaqa fiicnayn intaad joogto Cologne.
Macluumaadka ay bixiyeen ku Jarmal Tareennada Railway shirkadda ka mid ma aha oo kaliya jadwalka tareenka, laakiin sidoo kale isku xidha jadwalka taraam iyo bas oo lagu daray waqtiga loo baahan yahay si ay u gaaraan stop ee kuugu dhow ama saldhigga on foot.
Rotterdam si Tareenadu Cologne
Antwerp in Tareenadu Cologne
Kolsch lahjad ee Cologne Carnival
Si aad u fahamto “la yaab leh” dhaqanka Cologne Carnival, waxaad u baahan doontaa in ay bartaan a tibaaxaha yar caadiga ah ka lahjad Kolsch ah. Haddii ay cusub in aad tahay, ha bilaabin shaki xirfadahaaga Jarmal – ha Jarmalka ugu garanayaa iyaga midkood.
Fastelovend, ama: Fasteleer
Damaashaadka, sidoo kale loo yaqaan “Season Fifth,” haya sida meel gaar ah kuna sugan laabta ugu Cologne dadka deegaanka in ay erayo badan, waayo waxay leeyihiin. Inkastoo Carnival, ama “Fastelovend,” ayaa la sheegay in ay bilaabaan on November 11 sannad kasta, run ahaantii “maalmo aad u weyn” bilaw Ladies’ Night, ama “Weiberfastnacht” on Thursday ka hor iyo ka waddaa ilaa waagu ka mid ah Ash Wednesday.
Luxembourg in Tareenadu Cologne
Liege in Tareenadu Cologne
Zurich si Tareenadu Cologne
Geneva in Tareenadu Cologne
Kolsch: Waa luqad kaliya waxaad cabbi kartaa. Taasi hungaaeada socda ee Cologne, halkaas oo lahjad iyo magaaladiisa diyaarid wadaagaan magac la mid ah. Sida caadiga ah waxay u adeegeen in dhaadheer, koob oo caato ah, inta lagu guda jiro Cologne Damaashaadka waxaa koobabka caaga ah oo kaliya maadaama aan quraarad jabaysa la oggol yahay waddada. Waa in aad la wareegaan Kolsch at Brauhaus a, in kastoo, xusuuso: Soo qaado lacag caddaan ah. Waa sida kaliya ee ay u soo iibsadaan tikidhada cabniinka ee buux- pubs.
Berlin si Tareenadu Cologne
Nuremberg in Tareenadu Cologne
Bonn in Tareenadu Cologne
A “Butzcher” waa smooch weyn. Inta lagu jiro damaashaadka Cologne Carnival, filan si aad u hesho dhunkaday (“gebutzt,” ama in ay sax tahay: “jebutz”) badan intii caadiga ahayd. Buuxi shisheeyayaal qaybiyo pecks aan dhib lahayn on shisheeyayaal’ dhabannada, in kastoo qaar ka mid ah Butzcher qoyan (ee caadiga ah Kolsch, “Butz”) Waxa kale oo laga yaabaa in smudge Carnival qurxiyo oo dhan wejigaaga.
Ereygan waxaa loola jeedaa pubs, baararka, ama maqaayado. Ku dhowaad dhammaan iyaga ka mid ah ka qayb qaataan dabaal Cologne Carnival. Waxay nadiifiyo alaabta si ay u abuuraan dabaqa a qoob ka weyn iyo qurxin wax walba colorfully muddo lix maalmood ah dabaal oo xiriir ah. In pubs badan oo degaanka, kaliya Kölsche music waxaa ciyaaray (songs in lahjad Kölsch ah). inta badan ee aad u heli doonaan in ay 300-mitir oo safaf dhaa-dheer ee hore ee masraxyada dhaqanka.
Waa maxay Weiberfastnacht?
Salaaddii hore ee subaxnimadii, jidadka dhammaystiraan doqonnada Cologne Festival ee dharka. at si sax ah 11:11 a.m., wadada Damaashaadka waxaa si rasmi ah u furay by duqa magaalada Cologne iyo Cologne ayaa bilawday duullaammo laga Carnival.
Xaqiiqada Interesting: haweenka (Haweenka)
In 1824 in Beuel, qayb ka mid ah Bonn, koox haween wasqa ah ayaa sameeyay guddigooda u gaarka ah Karneval. Waxa ay u muuqataa, waxay ahaayeen daalay dhaqidda dharka halka qof kasta oo kale ahaa dabaal Karneval. Waxay weerareen Hall Town iyo wareegtay dowladda magaalada. (Bal haatan soo xusuusta ... Karneval waa waqti marka saraakiisha dowladda furan caricatured, iyo dawlad ku majaajiloodaan loo doortay. maanta, this "foosha xun ee Town Beuel ah Hall" by haweenka lagu muujiyay live on Television. Girl Power!
March 1: Damaashaadka Jimcaha
Maanta run ahaantii waa maalin nasasho. Laakiin waxaan ma qaadan lahaa mid aad u halis ah. kalfadhi oo fara badan iyo kubadaha ka dhacay fiidkii maalinta this. Sidaas darteed haddii aad raba Koox, aad noqon doonaa hubi inaad ka heli mid ka mid ah.
March 2: Damaashaadka Saturday
Ka dib markii Alighieri Carnival la Kölsch biirka, waxaa jira qaab ciyaareed at fadhi oo ka mid ah bulshooyinka Carnival la dhaqan military ee Neumarkt ah. In fiidkii waxaad tagi kartaa Parade Ruuxa.
March 3: Damaashaadka Sunday
Laga billaabo 11:11 a.m., ugu maraan dugsiga iyo dariska March iyada oo bartamaha magaalada, soo bandhigtay kooxaha dugsiga costumed iyo ekaysiiyaa asalka martigeliso kooxaha xaafadda.
dhibic sare ee kalfadhiga waa parade weyn on Monday Rose. sabbaysiinaynaa The bilaabaan inay parade magaalada at iyada oo loo marayo 10 a.m. Ka qaybgalayaashu waxay afuufaan dhunkashooyinkiisu u badnaa costumed lasoo wadada dabaaldega.
March 5: Damaashaadka Tuesday
Duhurkii waxaa jira wada maraan meel la kooxaha ku qosla costumed in agagaarkeeda. Ka dib markii in, dabaal tagaan on ilaa habeenbadhkii, marka tirada caws engegan oo kale loo yaqaan "Nubbel" waxaa lagu aasay ama lagu gubay.
Aroortii, Catholics kaniisadda aadaa si aad u hesho karoos dambaska wejiga sida calaamad toobadda. makhribkii, sano ee xilli Carnival dhaqan ahaan gabagabeeyay at casho kalluun.
Baannu kuu qanciyay in ay ka qayb Cologne Festival 2019, weli? Midhadh tigidhada tareenka aad ka Sava A tareenka in daqiiqo oo dheeraad ah ma, ajuurada sacoto! Tan macnaheedu waa lacag badan oo loogu talagalay Weetschaff 🍻
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcologne-festival%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#CologneFestival #Koln europetravel Dabaaldag longtrainjourneys trainjourney travelcologne traveltips